thinzar's blog: December 2008
၂၀၀၈ ခုနှစ်လည်း ကုန်ခါနီးပြီ။ ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရရင်…
Jan – အလုပ်စဝင်ပြီး တစ်လကျော်ကျော်လောက် ရှိသွားပြီဆိုတော့ အလုပ်ထဲမှာ နည်းနည်း နေသားကျသွားတယ်။ ကျောင်းကို လွမ်းတာလည်း နည်းနည်း လျော့သွားတယ်။ project တစ်ခု ရဲ့ အခက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတော့ meeting တွေတက်ရင်း ဆရာဝန်တွေနဲ့ ငြင်းခုံရင်း တော်တော် အလုပ်ရှုပ်တဲ့ လတစ်လ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
Feb – ရထားပေါ်မှာ ဖုန်းအခိုးခံလိုက်ရတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းပျောက်တာဆိုတော့ တော်တော် ဝမ်းနည်းမိတယ်။ အလုပ်ကတော့ အရင်လတွေအတိုင်းဘဲ။ OT နည်းနည်း များတယ်။ weekend တွေပါ အိမ်မှာ လုပ်ရတဲ့ အပြင် ရုံးကနေလည်း တော်တော် နောက်ကျမှ ပြန်ရတဲ့ရက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။
March – ကျောင်းပြီးနောက် စစချင်းလုပ်ရတဲ့ project ရဲ့ နောက်ဆုံး phase ဆိုတော့ တော်တော် ပင်ပန်းသွားတယ်။ အပါတ်တိုင်း review, UAT, FAT, training တွေအတွက် ပြင်ဆင်နေရတယ်။ final year project အတွက် ရေးထားတဲ့ paper ကို International Conference တစ်ခုက လက်ခံတယ်ဆိုလို့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။
April – မေလမှာ conference တက်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ ပြင်ဆင်ရတယ်။ ငါးလလောက် ပစ်ထားတဲ့ VMWare ကို ဖုန်သုတ်ပြီး result အသစ်တွေ ထပ်ထုတ်ရတယ်။ ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လွမ်းမိသလိုလိုတော ့ရှိသား။ အလုပ်အနေနဲ့ကတော့ နည်းနည်း အားသွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ bug fixing ဘဲ အဓိက လုပ်နေရတာ။
May – conference အတွက် ပြင်ဆင်ရင်း freelance project တစ်ခုကို လက်ခံလိုက်တယ်။ conference ကြောင့် မအားပေမယ့် တစ်ဘက်ကလည်း ကိုယ့်ကျောင်းအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်လို့သာ။ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ လတစ်လ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီအချိန် ရုံးမှာလည်း project အသစ်တစ်ခု ထပ်လုပ်ရတယ်။ နှစ်ခုလုံး .NET project ဖြစ်နေလို့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ မဟုတ်ရင် လေးငါးလလောက် မလုပ်ဘဲ ပစ်ထားတဲ့ language ဆိုရင် မနည်း ပြန်လေ့လာရမယ်။ Asian Universities Debating Championship (AUDC) မှာ volunteer သုံးရက် သွားလုပ်တယ်။ ၂၀၀၈ မှာ အလုပ်အများဆုံး လတစ်လ လို့ ပြောရမယ်။ မြန်မာပြည်ကို နာဂစ်ဝင်သွားတော့ ကျောင်းကကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး အလှူငွေကောက်တာ ဘာညာ နည်းနည်း ဝင်ကူလိုက်သေးတယ်။ တစ်ခြားအလုပ်တွေကလည်း ဒီတစ်လထဲမှာ လာစုနေတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ဘူး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
June – လက်ထဲမှာ project သုံးခု ရောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အားလုံးက bug fixing နဲ့ new feature request တွေချည်း။ bug fixing လောက် ပျင်းဖို့ ကောင်းတဲ့ အလုပ် မရှိတော့ဘူး။ အလုပ်ကိုတောင် နည်းနည်း စိတ်ပျက်ချင်ချင် ဖြစ်မိတယ်။ လကုန်ခါနီးမှာတော့ အရင် အလုပ်ထွက်သွားတဲ့ senior programmer တစ်ယောက်လုပ်ထားတဲ့ project တစ်ခုကို feature တစ်ခု ထပ်ဖြည့်ဖို့ တာဝန်ယူရတယ်။ သူများ code တွေ ပြန်ဖတ်ရတာ သိပ်တော့ မလွယ်တဲ့ အလုပ်ဘဲ။ အဲဒီလူကြီးရေးထားတာက တော်တော်ကို အဆင့်မြင့်လွန်းတယ်။ AJAX တွေ ဘာတွေလည်း ပါတယ်။ အစက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်နိုင်မယ်တောင် မထင်မိဘူး။
July – အလုပ်မှာတော့ bug fixing ဘဲ။ ဘွဲ့ယူဖို့အတွက် မိဘတွေလာလည်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ ပြင်ဆင်တယ်။
August - ၂၀၀၈ ခုနှစ် အတွက်တော့ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး လတစ်လပေါ့။ (ကြားထဲမှာ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့် နည်းနည်း စိတ်ညစ်လိုက်ရတာက လွဲရင်။) လေးနှစ်လုံး ကြိုးစားလာတာ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတင် ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့ရကျိုး နပ်သွားတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရတယ်။ မိဘကို စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်ခုတော့ ပေးနိုင်လိုက်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
Sept – အလုပ်မှာ ပရောဂျက် အသစ်တစ်ခုအတွက် requirement gathering နဲ့ database design phase ကိုင်ရတယ်။ ဒီလရောက်တော့ ကိုယ် အခုလုပ်နေတာတွေဟာ ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေဝေမိတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံသွားရင် ကောင်းမလား။ ရန်ကုန်ဘဲပြန်ပြီး programmer လုပ်စားရင် ကောင်းမလား။ ကျောင်းဘဲ ဆက်တက်ရင် ကောင်းမလား ဆိုတာ တော်တော် ဝေခွဲမရ ဖြစ်သွားတယ်။
Oct – အောက်တိုဘာ ခရီးသွားလပေါ့။ ရန်ကုန်ပြန်တယ်။ မလေးရှားပြန်လာတယ်။ ဆော်ဒီသွားတယ်။ မလေးရှားကို ပြန်လာတယ်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်ထပ်ပြန်တယ်။ (transit ဆိုတော့ ဘန်ကောက်ပါ ရောက်လိုက်သေးတယ်။) Personal Development Workshop တစ်ခု တက်ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် အမြင်တွေ အများကြီး ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အိုင်ဒီယာသစ်တွေ ရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖို့ ခွန်အားသစ်တွေ ရလိုက်တယ်။ Umrah လုပ်ဖြစ်လိုက်တာက အားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
Nov – တောင်ကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။ တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးမှ ပြန်ဖြစ်ပေမယ့် တောင်ကြီးမြို့ကတော့ အရင်အတိုင်းပါဘဲ။ ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာကတော့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲနဲ့ သွားကြုံတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အင်းလေးသွားဖြစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မပြန်ချင် ပြန်ချင်နဲ့ မလေးရှားပြန်ခဲ့ရတယ်။ ခွင့်ယူတာ ငါးပါတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အလုပ် အကြွေးတွေ ပုံသွားတယ်။ အားတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ GoMobile Expo မှာ exhibitor သွားလုပ်ရတယ်။ အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ ရလိုက်တယ်။
Dec - ရုံးက စပွန်ဆာ လုပ်လို့ conference တစ်ခု တက်ဖြစ်တယ်။ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေ နည်းနည်းရတယ်။ project module by module review ဆိုတော့ နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်ပြန်ရော။ ရုံးပိတ်ရက်တွေ များတော့ ဟိုလည် ဒီလည်ပေ့ါ။
တစ်နှစ်လုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ တစ်ခြားလုပ်ခဲ့တာတွေကို အားရပေမယ့် အလုပ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သိပ်အားမရဘူး။ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်သလိုဘဲ။ နောက်နှစ်မှာ ဒီတစ်နှစ်လို အီးယောင်ဝါး လုပ်မနေတော့ဘဲ ပိုကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားတော့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းနည်းသွားတယ်။ ဒါလည်း သိပ်မကောင်းဘူး။ New year resolution သတ်မှတ်ရမယ်။
သားအဖနှစ်ယောက်နဲ့ နွားပုံပြင်ကို လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာပေါ့။ နွားကို စီးတော့လည်း အကြင်တရားမရှိဘူးလို့ အပြောခံရတယ်။ မစီးပြန်တော့ အ သတဲ့။ သားကို ပေးစီးတော့ လူကြီးသူမကို မရိုသေ၊ အဖေစီးတော့ ကလေးကို နှိပ်စက်တယ် ဖြစ်ပြန်ရော။ ဒီလိုပါဘဲ။ လောကကြီးက ခက်တယ်။
အဲဒီပုံပြင်ကို ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက လို့ အစချီပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုထားတာ နားထောင်ပြီး အရမ်းကြိုက်သွားလို့ ပြန် share လိုက်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဆိုတော်ကတော့ “အရိုး” ဆိုလား သိပ်တော့ မသေချာဘူး။ (တောကျောင်းဆရာ ပြောပြသွားတာ။ ရေးသူကော ဆိုသူပါ အရိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။)
ယနေ့ handphone တွေဟာ ဖုန်းပြောဖို့တင် မဟုတ်ဘဲ စွယ်စုံသုံးလို့ ရပါပြီ။ ကျမလို ကပ်စေးနဲနဲ နည်းတဲ့သူတွေကတော့ Java Apps တွေကို ဝယ်ဖို့ သိပ်စဉ်းစားကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူများရဲ့ Intellectual Property ကို လေးစားပေမယ့် free ရဖို့ဘဲ လိုက်ရှာနေမိတယ်။ http://myn73.hafees.com/ ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်ကို အမှတ်မထင်ရောက်သွားပြီး ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တော်တော်များများကို download ဖြစ်တယ်။ သူကတော့ N73 အတွက် အဓိကထားရေးပေမယ့် applications တွေက Symbian (S60 series) ဖုန်းတော်တော်များများကို support လုပ်ပါတယ်။
N73 အတွက် download လုပ်သုံးကြည့်ပြီး သဘောကျမိတဲ့ apps တွေကတော့ ...
1. Webster Dictionary: တော်တော်ပြည့်စုံရှည်လျားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါတဲ့ အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူရင်းစာလုံးကို အပေါ်နားမှာ မပြထားပေးတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ငါဘာစာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာလိုက်ပါလိမ့်ဆိုတာတော့ ပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။
2. English-Chinese-English Dictionary: လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ပေးပါတယ်။ စာလုံးအရမ်းစုံတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တရုတ်စာကို ပိုကြိုက်မိတာက မြန်မာလို ၁ဝလုံးလောက်ရေးရမယ့်နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ဆို ငါးလုံးလောက် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်နေရပြီး တရုတ်လို စာလုံး နှစ်လုံးလောက်နဲ့ ပြီးသွားလို့ပါ။ ဘယ်က download လုပ်ထားလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ Apps မှာ About လည်း မပါတော့ ပြန်ရှာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ mediafire မှာ တင်ပေးဖို့ဆိုတော့လည်း ဘယ်နား save ထားမှန်း သတိမရတော့လို့။ link ရှာတွေ့မှ ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
3. Scientific calculator: ဖုန်းထဲမှာ scientific calculator သုံးလို့ရတော့ အရမ်း အသုံးဝင်တာပေါ့။ ဘဝမှာ အမြဲတွက်ချက်နေရတာ မဟုတ်လား။ free download လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သုံးရလဲ လွယ်တယ်
4. S60 Spot On: အရင် sony ericsson သုံးတုန်းက ကင်မရာ flash ကို torch light အဖြစ် သုံးလို့ရတော့ တော်တော် အဆင်ပြေပေမယ့် N73 ကို torch light အဖြစ်သုံးချင်ရင် video mode မှာ သွားသွားဖွင့်ရတာ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အခု S60 spot on ဆိုတဲ့ apps ကို သွင်းပြီးသွားတော့ N73 ကိုလည်း လက်နှိပ်ဓါတ်မီး အဖြစ် အလွယ်တကူ သုံးလို့ ရသွားပါပြီ။
5. Screen shot – ဖုန်း screen shot ရိုက်တဲ့ software တော့ တစ်ခါတစ်လေ လိုခဲ့သည်ရှိသော်ဆိုပြီး download လုပ်ပြီး သွင်းထားလိုက်တယ်။ ဒီပို့စ်ရေးတော့ ပုံလေးတွေထည့်ဖို့ အသုံးဝင်သွားတယ်။
6. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက် Quran, Hadith, Doa, Zikir, Zakat Calculator စတဲ့ apps တွေကိုတော့ www.guidedways.com တွေမှာ တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ apps လေးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ သုံးနေရင်း expired ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ တစ်ခုကလွဲရင် ကောင်းပါတယ်။ အလကားရတယ်ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမပေါ့နော်။
Games တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Gameloft ကနေ download လုပ်ဖြစ်တာ များတယ်။ handphone ကတော့ ကျမအတွက် swiss knife အတိုင်းပါဘဲ။ (တစ်ချက်တစ်ချက် hang သွားတာကလွဲရင် :-P ဖုန်းခေါ်တာကလွဲရင် အားလုံးလုပ်လို့ရတယ် ဖြစ်သွားတော့မယ်။) နောက် အသုံးဝင်မယ့် freeware, shareware လေးတွေရှိရင်လည်း ဝေမျှပေးကြပါဦး။